Gbalịa ị nweta ihe ngosi apụ na GeForce UGBU A | Gam akporosis
Ya anyị nwalere Ray Tracing na Cyberpunk site na Geforce UGBU A na Chrome, nke mere na oge a anyị na-akpali gị gbalịa nwegasịrị ngosi nke Outriders n’otu ebe ahụ na site na mkpanaka gam akporo gi.
Otu ihe ọhụụ karịa na-akpali mmasị na-agbalị a shooter e mere site na ndị mmadụ nwere ike ofufe, ikpe mara nke egwuregwu nke umi dị ka ha Bulletstorm, Gears nke Agha Ikpe y Ihe mgbu. Dobe n'okpuru iji chọpụta ihe dị ọhụrụ na Geforce ugbu a yana otu ị ga - esi gbalịa igosipụta ya n'efu rue mgbe egwuregwu maka ọnwa Eprel ga - abịarute.
1 Ihe ị kwesịrị igwu egwu Outriders na GeForce Ugbu a maka gam akporo
2 Outriders: ngosi n'efu rue Eprel
3 Egwuregwu ọhụrụ 11 maka GeForce UGBU A
Ihe ị kwesịrị igwu egwu Outriders na GeForce Ugbu a maka gam akporo
O nwere ike ịbụ na ị maraworị na GeForce Ugbu a bụ egwuregwu na-agba ọsọ n'elu ikpo okwu na Ihe ejiri mara ya bụ ikwe ka anyị kpọọ egwuregwu kachasị amasị anyị na mma kacha mma. Nanị ihe anyị chọrọ bụ njikọ goodntanetị dị mma ma jikọọ ụfọdụ akụkọ ndị a ga-esi malite egwuregwu ndị ahụ; ma ugwo ma n'efu.
Ka anyị kwuo GeForce Ugbu a dị ka Netflix nke egwuregwu gụgharia ịghọta anyị. Ọzọ nke kachasị mma ya bụ ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke nyiwe nke anyị nwere ike ịgbasa ma kpọọ egwuregwu anyị: nchọgharị Chrome, Android, iOS, Windows, Mac na ọbụlagodi Google TV.
Nke a na-enye anyị ohere ịme na-enwe ọkacha mmasị anyị egwuregwu na anyị gam akporo mobile site na blu Bluetooth njikọ nke ikuku njikwa ma ọ bụ na òké ma ọ bụ kiiboodu site na otu njikọ.
Ma nke ahụ bụ ọbụna ị pụrụ ịnụ ụtọ a mebere ime akara na ihuenyo ma ọ bụ keyboard iji nwee ike igwu egwuregwu ụfọdụ; Ọ bụ eziokwu na onye njikwa kwalite asụsụ ọma nwere ike ọ gaghị adị oke mma, mana na nke a ị ga-enwe ike ịnụ ụtọ egwuregwu ọhụrụ a akpọ Outriders.
Nke a bụ ihe ịchọrọ:
una GeForce Ugbu a akaụntụ ma obu n'efu ma obu ugwo (n'efu na-enye ohere otu awa n'efu kwa ụbọchị)
Jikọọ Steam akaụntụ na PC iji malite Outriders
A ọma internet njikọ; ma ọ bụrụ na ọ nwere ike ịbụ eriri karịa ka mma
Outriders: ngosi n'efu rue Eprel
Outriders bụ ngosipụta n'efu anyị nwere ike igwu egwu site na mkpanaka anyị na GeForce UGBU a rue ọnwa Eprel. Ọbụna njem niile anyị mere ga-enwe ike ịfefe mgbe anyị zụtara egwuregwu ahụ na mbido.
La ngosi gụnyere isi akụkọ na ozi ọzọ anọ. Egwuregwu nke anyị nwere ike igwu naanị ma ọ bụ na-ekwenye ekwenye na RPG nwere eserese ngosi na 3D nke ga-ahapụ anyị anya. Otu RPG nke akụkọ ahụ bụ akụkụ dị mkpa nke nkata ahụ nke mere na site na mkpanaka anyị, anyị nwere ike ịnụ ụtọ ihe kacha mma na ọkwa eserese.
N'ezie, gị anyị na-akwado ka ị jiri remote na Bluetooth nke mere na ihuenyo nke mkpanaka gị dị ọcha. Ma ọ bụ na site na iji mebere eziokwu ahụ na njikwa ndị na-e theomi nke ezigbo ya na-ewere ohere buru ibu.
Egwuregwu ọhụrụ 11 maka GeForce UGBU A
Kemgbe ụbọchị ụka gara aga GFN gụnyere egwuregwu ọhụrụ 11 nke anyị nwere ike ịkọwapụta: Nkọcha nke Chi Nwụrụ Anwụ; roguelike sitere na Passtech Games nke na-akpọga anyị n'ụlọ nsọ a bụrụ ọnụ na ọnyà na-egbu egbu na anụ mmiri; Schoollọ akwụkwọ Old School RuneScape, na akụkọ ifo online RPG nke 2007 dị maka ị na-enwe obi ụtọ; Na Ndị dike: Roins nke Tasos.
Ndị a ọ bụ 11 ọhụrụ egwuregwu:
Art nke Rally (Steam y Egwuregwu Egwuregwu Epic)
Ọbụbụ ọnụ nke Chi Ndị Nwụrụ Anwụ (Steam)
Labyrinth nke Refrain: Ọgbụgba ndụ nke Dusk (Steam)
Ndị dike na Ime Anwansi VII (Steam)
Observer sistemụ Redux (Steam)
RuneScape ochie akwụkwọ (Steam)
Outriders ngosi (Steam)
Nnukwu oru ngo (Steam)
Ndị dike: Roins nke Tasos (Steam)
Sistem ngosi (Steam)
Igwe eji arụ ọrụ tank tank (Steam)
Yabụ ugbu a inwere M na-egwu egwu na ngwụsị izu na ndị ahụ Outriders na ngosi ngosi ya dị na GeForce Ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Gbalịa gosipụta ihe ngosi dị na Geforce UGBU a na ekwentị mkpanaaka gị
Egwu YouTube na-enye ohere ịmegharị egwu mgbe ejikọtara ya na ndị ọkà okwu